Tarjumaankii gacan siiyey Joe Biden oo Senator ah iyo Qoyskiisa oo ka baxsaday Afghanistan - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Nin tarjumaan oo gacan ka geystay badbaadinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli uu duufaan baraf ku qabsaday Afghanistan 2008, ayaa isaga iyo qoyskiisa waxay ka baxsadeen Afghanistan, kadib markii ay toddobaadyo ka dhuumanayeen Taalibaan, waxaa sidaas xaqiijisay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Sanadii 2008, Khalili ayaa ahaa tarjumaan u shaqeynayey ciimada Mareykanka, markii Biden oo xilligaas ahaa Senator, islamarkaana ay wehliyeen laba senator oo kale Chuck Hagel iyo John Kerry, ay booqdeen dalka Afghanistan.
Markii duufaan baraf uu ku qasbay diyaarad helicopter oo ay la socdeen inay cago dhigato meel baadiye ah, Khalili ayaa ku biiray ciidan militari ah oo ka tegay saldhigga Bagram, oo ugu tegay buuraha si ay u badbaadiyaan wafdiga.
Codsi uu diray Bishii Ogost oo uu qoray Wargeyska caanka ah ee Wall Street Journal ayuu ku yiri: “Hello, Mudane Madaxweyne: Badbaadi aniga iyo qoyskeyga” . Waxaa markaas socday daad-gureynta 120,000 oo qof oo laga soo qaaday Afghanistan.
Previous articleShirkad Ingiriis ah oo DP World kula heshiisay Maalgashi lagu sameynayo Dekadda Berbera
Next articleAKHRISO: Qoraal Culus oo Garsoore Cabdiqawi ku diiday Qodobo ka mida Go’aankii Maxkamadda ICJ